Dingana 4: Mamakia ny Hafatrao
Ny dingana manaraka dia mamolavola hafatra manan-danja, izay ahitana ny asa (s) atao (antsoina hoe "antso ho amin'ny asa") avy amin'ny mpihaino. Raha mahomby izy ireo, dia hisy fiantraikany amin'ny toe-tsaina izany ary hisy fiantraikany amin'ny fitondrantena, na hampitombo fotsiny ny fahalalana, ny mpihaino anao.
Jereo ny famelabelarana fohy momba ny famoahana ny hafatrao:
Araho ireto torolalana 8 ireto mba hamoronana hafatra mahomby:
Manaova fifandraisana ara-pihetseham-po
Omeo ny lanjan'ny fandraisana andraikitra
Mazava ny zavatra tianao hataon'ny olona (antso ho amin'ny hetsika)
Ataovy mazava tsara ny hafatrao
Ataovy tsotra ny hafatrao, esory ny jargon
Asongadino ny soa azo
"Na dia manamarika tarehimarika aza ianao, dia tadidio fa: tarehimarika tsy misy dikany, jargon, ary tsy nisy olona nanao diabe tany Washington noho ny teti-bola. Raha te hifandray amin'ny mpihaino anao ianao dia lazao tantara. "
Andy Goodman ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamoahana tantara tena tsara)
1. Manaova firaisana ara-pihetseham-po
Afisy notontosain'ny Ka'ūpūlehu Marine Life Counseling Komity mba hananganana fanohanana ny tahirin-dranomasina folo taona. Ohatra avy amin'ny hafatra mahaliana iray (tsindrio raha hamarana sary).
Ny fihetseham-po dia mety hitarika asa mihoatra ny antony / lojika
Ny fizotran'ny atidoha dia mampihetsi-po na mampihetsi-po. Ny rafitra fanaraha-mason'ny fanandramana dia manara-maso ny fihetsika velona anao, ary loharanon'ny fihetseham-po sy ny fanahinao. Ny rafitra fanaraha-maso ny fandalinana dia ny famakafakanao ny fahalalana siantifika. Ny rafitra fanaraha-maso ny fanandramana dia matanjaka kokoa ho an'ny hetsika, saingy hevitra tsara ny mamorona hafatra izay ampiharina amin'ny karazana fanodinana roa.
Hafatra mailo manosika ny fitondran-tena
Mba hampakarana ny rafitra fanaraha-maso ny fanandramana ataon'ny olona, ​​mila mifandray am-pihetseham-po isika. Saingy ny fihetseham-po samihafa dia miteraka fihetsiketsehana samihafa. Ohatra, ny tahotra na ny alahelo, na ny paikady mahatsiravina, dia manintona ny saina ary mety hahomby amin'ny ezaka fampandrosoana ny fotoana fohy, fa tsy amin'ny fiovan'ny fitondran-tena. Raha ny marina dia afaka mitarika ho amin'ny tsy firaharahiana izy ireo. Hafatra izay manentana sy manome hery, ary manolotra vahaolana bebe kokoa noho ny olana dia mpamily mahery kokoa amin'ny fiovan'ny fitondran-tena.
Ataovy izany manokana
Ny fifandraisana ara-pihetseham-po mifandray amin'ny zavatra tian'ny mpihaino - amin'ny foto-pisainana sy ny soatoavina fototra - dia mety hanosika ny fihainoana, ny fihetsika ary ny fiovan'ny fitondran-tena. Ataovy mazava tsara ny fiantraikan'izany eo amin'ny mpihaino anao.
2. Omeo ny fandaharam-potoana hiadiana
Hafatra fototra dia tsy maintsy manazava ny antony tokony hanovan'ny mpihaino ny fitondran-tenany na hanohana ny antony. Tsy maintsy mazava tsara ny zavatra ao aminy ary maika dia maika izy ireo ankehitriny. Ireo torolalana ireo dia hanampy anao hampahalalaina ny teknika sy siantifika ho an'ny mpihaino anao.
Ampio ny siansa, fa tandremo tsotra sy mijery izany
Ny ankamaroan'ny olona dia mahita sy mahatakatra an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny sary, tsy lisitra tarehimarika na tarehimarika, ary noho izany dia tsara ny mifandray amin'ny sary, sary tsotra, na fanambarana iray na roa. Handika teny sy handika ny fiteny teknika amin'ny tatitra siantifika ho fanambarana tsotra sy mifanentana.
ohatra: "Tao anatin'ny taona 40 farany dia efa mihoatra ny antsasaky ny vatoharanay izahay."
Ataovy tsotra ny sary sy ny sary, ary mazava ho azy ny mpihaino anao ny fampahalalana tianao hampifantoka azy ireo.
manokatra fisie IMAGE manokatra fisie IMAGE
Infographic 1: faritra tsy voaaro amin'ny faritra arovana an-dranomasina amin'ny Ocean Conservancy. Infographic 2: Ohatra iray amin'ny sary tsotra maneho ny fihenan'ny isan'ny grouper (trondro) avy amin'ny 4FJ Campaign, hetsika iray any Fiji hiarovana ny grouper mandritra ny volana fanatodizany (kitiho ny sary hanitarana).
Ohatra amin'ny fizarana ny fomba fijerin'ny olona manokana avy amin'ny bokin'ny Conservation Council ao Kaupulehu (click to enlarge).
Zarao ny fomba fijery manokana
Ny fandinihana manokana dia fomba mahery vaika hizarana "ny antony" tokony hikarakarana ny olona. Tsy misy mahasamihafa ny fampahalalana mivantana avy amin'ny loharano, indrindra fa rehefa misy hafatra avy amin'ny olona iray izay manaja ny mpihaino anao. Ny zava-misy iray na roa izay manana hery ara-pihetseham-po avy amin'ny mpitondra hafatra azo itokisana dia mety hampisy lanja lehibe amin'ny hafatrao. (Ho tonga eto amin'ity hevitra ity izahay rehefa miresaka momba ny iraka tatỳ aoriana.) Ireo fandinihana ireo dia niara-niasa tamin'ny fanampian'ny siansa tandrefana nandrakitra sary feno ho an'ny mpanatrika izay tena nitranga.
3. Mahaiza mandanjalanja amin'izay tianareo hataon'ny olona
Aza adino ny mampiditra ny antsonao hanao hetsika ao amin'ireo hafatrao lehibe. Inona ny fihetsika ezahanao ovaina na amporisihinao? Inona ny hetsika tianao hataon'ny mpihaino anao? Manana fahatakarana mazava momba ny hetsika tianao tadiavin'ny olona mba hahafahanao mampita izany amin'izy ireo amin'ny fomba mahomby.
Ohatra iray hafa avy amin'ny fanentanana 4FJ, fikambanana iray hiarovana ny mpiompy mandritra ny vanim-potoana fitetezany any Fiji. Ity sary ity dia maneho ny 'antso ho amin'ny hetsika' mazava sy ny tombontsoa azon'ny mpijery atao (click to enlarge).
4. Ampifanaraho ny hafatrao hiasanao mba ho mora takarina sy hikolokolo
Ny fomba tsara hanampiana ny mpihaino anao hahatsiaro ny hafatrao dia ny manazava izany amin'ny zavatra zavatra efa fantany, sy hitany ary tsapany ary ny maha-azo antoka azy fa tsy ny fialan-tsasatra. Mba hampahafantatra kokoa ny hafatrao, ampifandraiso ireo hevitra tsy azo tsapain-tanana amin'ny zavatra azo tsapain-tanana.
Zavatra tsy azo tsapaina (hevitra, finoana, fihetseham-po, soatoavina, fihetsika)
Zavatra azo tsapain-tanana (fahatsapana dimy - izay hitantsika, maimbo, henontsika, kasikantsika, tsapantsika)
Ohatra: Ny Grouper (azo tsapain-tanana) dia ampahany manan-danja amin'ny lovantsika sy ny fomba fiainantsika amin'ny maha-Islandy Pasifika (tsy mety).
Ny fomba iray hizarana ireo hevitra azo tsapain-kevitra sy fananganana zavatra efa fantatry ny olona dia ny fampiasana analogie na metafôra.
Ohatra: Inona no tsara kokoa? A) trozona maitso dia mety hahatratra ny lavan'ny tongotra 45 ary mandanja hatramin'ny taonina 40. B) Kitapo maitso raha mbola misy fiara fitateram-bahoaka?
Ny fametrahana tarehimarika azo itokisana sy tsy hay hadinoina dia mahomby kokoa noho ny lisitra antontan'isa.
Ohatra: Inona no fiantraikany bebe kokoa? A) Misy fivarotana basy 65,000 XNUMX any Etazonia. B) Betsaka ny toeram-pivarotana basy any Etazonia noho ny Starbucks, McDonald's, ary ny fivarotana lehibe.
5. Ataovy tsotra ny hafatrao, Aza jiro
Ny asa rehetra dia manana adihevitra izay fantatry ny mpikaroka, saingy mampisafotofoto ny hafa. Mba hisorohana ny hafatrao tsotra sy tsy hay hadinoina, alaviro ny jargon. Ny jargon fitahirizana dia ahitana teny toy ny karazan-karena, biomass, ary ny laharana voalohany.
Raha tsy mampiasa jargon ianao dia ataovy izay hanazavanao ny dikan'ny teny tsotra.
Ohatra: ny "Spillover" dia ny tombontsoa ao anaty faritra fitsaharana an-dranomasina, toy ny trondro maro sy ny olitra maro kokoa, mihintsana ao anaty - na manitatra any - ireo faritra ivelan'ny tahiry an-dranomasina.
Ampiasao ny teny efa mahazatra mba hifandraisana amin'ny mpihaino anao ary ampio ny hafatrao hikolokolo:
Ocean vs Marine Environment
Ny olona vokatry ny anthropogenic
Fomba fanoherana ny metodolojia
Salama tamin'ny Robust
6. Asongadino ireo soa azo
Mba hanentanana ny mpihaino anao hanohana ny antonyo sy hanao ny hetsika tianao hataon'izy ireo dia zava-dehibe ny ampahafantaro azy ireo izay ho azony avy amin'izany - ny tombontsoa fohy, salantsalany ary maharitra ho azy ireo. Miezaha mametraka ny tenanao amin'ny kiraron'izy ireo - inona no karakarain'izy ireo amin'izany? Ny haran-dranomasina ve sa ny reharehan'ny toekarena, fivavahana, ankizy, fahasalamana, na avonavona?
Noho izany antony izany ihany, dia tadidio ny tombontsoa tsara. Ohatra, raha miresaka momba ny tahirin-dranomasina iray ianao dia mifantoha amin'izay mety ho vitan'ny olona, ​​toy ny filomanosana, snorkel, mitsambikina, sns. Ny tombony dia mety ho trondro bebe kokoa any amin'ny faritra manodidina, na amin'ny hoavy. Na, miankina amin'ny mpihaino, ny tombontsoa mety hampivoatra ny fizahan-tany izay mampitombo ny fidiram-bola ho an'ny orinasa madinika.
Misafidiana teny izay manapotipotika sy misoroka ireo teny izay mety misy fiaraha-miory ratsy na ireo mpanentana amin'ny mpihaino anao. Ohatra, ny mpanarato iray dia mety hanohana bebe kokoa: "Fitrandrahana ranon-trondro "noho ny" faritra tsy misy toerana. "
Ohatra amin'ny fanasongadinana ny tombontsoa azo amin'ny fiarovana ireo toeram-ponenan'ny trondro avy amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSarin'ny tetikasa Ocean Wealth Project (tsindrio ny sary mba hampitatra).
7. Ataovy azo antoka ny hafatrao
Ny hafatra azo itokisana dia tsotra, mazava ary adiresy ny olana. Tsy dia mampihomehy loatra izany, manolotra zava-misy izay aloha loatra, manitatra, manohitra ny fampanantenana, na manampatra ny hafa.
8. Lazao ny tantara
Mahatakatra an'izao tontolo izao ny olombelona amin'ny tantara. Ny fitantarana tantara dia ampahany lehibe amin'ny zava-niainan'olombelona - nanomboka tamin'ny sary sokitr'ireo mponina an-jato taona maro lasa izay ka hatramin'ny fanaovana tantara an-tserasera mifototra amin'ny taonjato faha-21. Nasehon'ny fikarohana fa ny filàn'ny olombelona mifampiresaka amin'ny tantara mirindra dia matevina ao an-tsaintsika. Raha te hitantara tantara mifandraika amin'ny olana mahomby ianao dia tokony hanomboka amin'ny antony maha-zava-dehibe ny olana (soatoavina), avy eo asehoy ireo olana mifandraika amin'io olana io, miafara amin'ny zavatra azon'ny mpihaino atao momba azy (aseho etsy ambany). Mianara bebe kokoa momba Famoahana vaovao momba ny fiovan'ny fiarahamonina avy amin'ny Frameworks Institute. Tadidio fa azo antoka fa ny tantaranao dia manondro mazava ny zavatra tianareo hataon'ny olona ary manampy amin'ny fananganana fanohanana ny asa fitoriana ataonareo.
Sarimihetsika mifototra amin'ny tantaran'ny tantara momba ny fiarahamonina misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFrameworks Institute.
Manoratra ny hafatrao - Ahoana no hamoronana hafatra manan-danja, mandaitra, hafatra azo tsapain-tanana izay mifanandrify amin'ny mpihaino anao
Jereo ny Box Box, fitaovana iray hanampy anao handrehitra fanazavana momba ny asanao / tetikasa amin'ny fehezanteny efatra na dimy manazava ny olana goavana, olana izay nitranga noho ny olana, ny fomba ifandraisanao amin'ny asa ataonao amin'ny mpihaino, ny vahaolana (ary ny anjara asan'ny mpihaino), ary ny tombontsoa (ho an'ny mpanatrika).
This workheet dia mifototra amin'ny fitaovana fikirakirana stratejika Smart Chart® avy amin'ny Strategy Spitfire sy ny Box OF Message of COMPASS.
“Hitako fa tena nilaina ny boaty hafatra ary mbola mampiasa an'io fitaovana io amin'ny asako ankehitriny. Nampiasako ilay boatin-kafatra mba hanampiana ahy handrafitra hafatra mivaingana ho an'ireo tetik'asa maro iasako. "
Seleni Cruz, mpandrindra ny fiarovana, ny natiora momba ny natiora
Manomboka amin'ny famantarana ny olana fototra sy ny mpihaino anao ianao. Avy eo dia mamelabelatra ny tantaranao amin'ny hafatra vetivety amin'ny famaliana ireto fanontaniana manaraka ireto:
Inona avy ireo olana / fifandirana mifandraika amin'ny olana goavana?
Nahoana no zava-dehibe amin'ny mpihaino ity fampahalalana ity?
Inona avy ireo vahaolana sasantsasany amin'ity olana ity? Inona no zavatra tianao hotenenin'ny mpihaino?
Inona avy ireo tombony fohy, mahazatra, ary maharitra ny famahana ity olana ity?
Ny Box Box dia azo ampiasaina amin'ny filàna maro samihafa. Ireto misy vitsivitsy:
Manoratra ny drafi-pifandraisana stratejika, tantara, na famoahana gazety
Miomana amin'ny tafatafa amin'ny media, fivorian'ny vondrom-piarahamonina, na fifanakalozan-kevitra tokana miaraka amin'ireo mpanapa-kevitra fototra
Manangana fitaovam-pitaovana toy ny bokikely sy ny peta-drindrina
Ny fampivelarana hafatra iray mampiasa ny Hafatry ny Hafatra dia dingana tsy tapaka. Mila roa farafahakeliny, ary mety ho ny isa dimy na enina no hanatsarana izany. Ny valiny avy amin'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-monina, ary koa ny mpihaino fitsapana, sy ny fampidinana avy amin'ny fikarohana sy ny fanombanana, dia mety hitarika amin'ny dikan-teny vaovao amin'ny hafatra Box.
Manoro hevitra ny fampihetseham-peo ny famakiana ny hafatrao Box ianao rehefa miteny mafy ianao miteny amin'ny mpihaino anao. Tsy mitovy ny hafatra rehefa mamaky ny andinin-teny, ary misy hafatra mahazatra afaka mitongilana kokoa.
Ny anjaranao (> atoro anao 45 minitra)
Ampiasao ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHafatra Box Box Messagemanokatra fisie PDF mba hampivelatra hafatra fototra momba ny asanao. Manoro hevitra izahay mba hameno azy indroa fara-fahakeliny vao manomboka - ny drafitra iray dia haka ny valin'ny atidohanao voalohany. Ny drafitra faharoa dia hanampy anao hanitsy sy hanapa-kevitra momba ireo hafatra manan-danja indrindra ho an'ny mpihaino anao.
Drafitra 1 (farafaharatsiny minitra 30 farafaharatsiny ho an'ny drafitra voalohany):
Atombohy amin'ny famantarana ny mpihaino anao - iza no hafatra ho avy? Mifidiana mpihaino iray avy amin'ny asa soratanao teo aloha ary soraty eo amin'ny asa soratana. Izany no manaparitaka ny hafatrao.
Avy eo dia fantaro ny olana goavanao. Inona no olana mitranga amin'ny tetikasa / vahaolana? Soso-kevitra: Satria tsy nisy namorona "olana" ny hetsika teo aloha, dia mety hahatsikaritra kely ity dingana ity. Mba hahafantarana ny olana misy anao, eritrereto ny fototry ny antony hiatrehanao ny vahaolana, ohatra ny fanimbana, ny fampandrosoana amoron-dranomasina, ny fandotoana rano, sns. Ity dia dingana iray manan-danja, satria raha mifantoka loatra amin'ny olana ianao, ohatra ireo trondro kely sy kely kokoa , dia sarotra kokoa ny mandresy lahatra ny mpihaino anao fa ny valan-javaboary dia vahaolana raha ny fihenan'ny trondro dia vokatry ny kalitaon'ny rano fa tsy mihoatra loatra. Tsara ny manana olana maromaro hanombohana, dia hanatsara ny drafitra faharoa ianao.
Farany, fenoy ireo fizarana hafa ao amin'ny Hafatry ny Hafatra, izany hoe "Ny olana, ny antony, ny vahaolana, ary ny tombontsoa." Manorata ny hevitrao amin'ny format bullet.
Drafitra 2 (omeo farafahakeliny 15 minitra ho an'ny drafitra faharoa):
Ao amin'ny takelaka fanoratana faharoa Box Box, afangaro ny hafatrao amin'ny alalan'ny famolavolan'ny mpihaino anao. Ny tanjon'ity dingana ity dia ny fametrahana ny votoatin'ny fizarana hafatra Box tsirairay amin'ny fehezanteny iray na roa.
Diniho ireto fanontaniana manaraka ireto:
Inona no tena mila fantarinao?
Hanontany ny mpihaino anao "inona ary?"
Moa ve ny anjara asan'ny mpihaino eo amin'ny vahaolana mazava, izany hoe fantany ve ny zavatra angatahanao ataon'izy ireo?
Moa ve ny hafatrao manantitrantitra ny valisoa ary mampita ny fanantenana ho amin'ny fahombiazana?
Moa ve nandika ny hafatrao ianao tamin'ny fampiasana fiteny mazava sy mazava izay hahatakaran'ny mpihaino anao?
Ohatra amin'ny bokotra Message faharoa faharoa.
Raha vantany vao tafapetraka ny hafatra fototra sy ny antso ho amin'ny hetsika, dia zava-dehibe ny mandinika ireo hafatra fototra sy tetikady ho an'ny mpihaino marimaritra iraisana. Ny fanombantom-panafody dia mamaritra hoe hahafantatra na hahomby ny hafatra ho an'ny tanjona tianao. Ampianarina ihany koa ny fahatokisan'ny mpihaino azy amin'ny tetika samihafa amin'ny fifandraisana ary ny valinteniny amin'ny fiovan'ny fitondran-tena. Azonao atao ny mialoha ny fanadinana amin'ny solontenan'ny vondron'olona kinendry amin'ny alàlan'ny fanadihadiana an-telefaona na mailaka. Azo atao ihany koa ny manangona vondrona madinika amin'ny mpihaino marobe ary maneho sy miresaka momba ny hafatra sy ny fitaovana fifandraisana miaraka amin'izy ireo. Ohatra, afaka manangona mpanjono vitsivitsy ny mpitantana iray, asehoy azy ireo ny fampisehoana na ny bokikely, ary makà fanamarihana momba ny fanamarihan'ny vondrona. Amin'ny alàlan'ny pretesting, afaka manamboatra hafatra sy tetika raha ilaina, ny mpitantana, ary misoroka ny fahadisoana sy ny vokatra tsy ampoizina avy amin'ny fifandraisana.
Mandehana any amin'ny Dingana 5: Fantaro ireo mpitsikilo sy mpihazakazaka mba hifampiresahana amin'ny hafatrao
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPsychology ny fiovan'ny toetrandro
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBiodiversity Branding and Messages manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy antony mahatonga ny doka ratsy amin'ny antony tsara - Andy Goodman dia mpampianatra serasera izay namokatra boky sy gazety maro izay manampy ireo tsy mitady vola hifampiresaka mahombymanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMaking Your Message Stick (boky ho an'ny fividianana)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMahaiza mandanjalanja ™
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBIRAOmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamoahana tantara toy ny Best Practice (boky momba ny fividianana)